Daawo:- Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Goordhow ka Degay Magaalada Jowhar - Hablaha Media Network
Daawo:- Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Goordhow ka Degay Magaalada Jowhar
HMN:- Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka iyo Wafdi xildhibaano ah oo uu hogaaminayay ayaa goor dhow gaary oo ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar.
Gudoomiye Jawaari iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa magaalada Jowhar maanta kaga qeyb galaya doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo maanta ;agu dooranayo magaalada Jowhar.
Qaban-qaabada doorashada guddoonka baarlamanka Hirshabelle ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar, iyadoo amaanka magaaladaasi si weyn loo xoojiyey waxaana hoolka ay ka dhaceyo shirka ku sugan inta badan xildhibaanada maamulka Hirshabelle oo soo dooranaya guddoomiyaha cusub.
Saddex musharax ayaa isku soo taagay xilka doorashada gudoomiyaha maamulka Hirshabelle, kuwaasi oo kala ah Abuukar Xasan Cali (Maqaney), Sh. Cismaan Barre iyo Cali Cabdulle Isgow, waxaana musharaxii ku soo baxa codeyntaasi uu noqon doonaa gudoomiyaha rasmiga ah ee Baarlamanka maamulka Hirshabelle.